Trump ayaa xaqiijiyey in hogaamiyaha Daacish Abuubakar al-Baqdaadi uu is qarxiyey… – Hagaag.com
Trump ayaa xaqiijiyey in hogaamiyaha Daacish Abuubakar al-Baqdaadi uu is qarxiyey…
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xaqiijiyay in la dilay Hoggaamiyaha Daacish Abuubakar Al-Baqdaadi, kaddib howlgal ay Ciidamada Milateriga Mareykanka ka fuliyeen waqooyiga dalka Suuriya.
Donald Trump oo goor dhow Wariyeyaasha kula hadlayay Aqalka Cad ayaa sheegay in Abuubakar Al-Baqdaadi uu u dhintay sidii Eeygi oo kale oo aanu sidii geesi oo kale u dhiman sida uu yiri.
Trump ayaa sheegay inay muddo todobaadyo ah ay ku raad-joogeen Al-Baqdaadi waxaa uu boggaadiyay Ciidamadii ka qeyb qaatay howlgalka, waxaana uu intaa ku daray in illaa 8 Helicopter ay ka qeyb qaateen howlgalkaas.
Abuubakar Al-Baqdadi ayaa la sheegay inuu is qarxiyay, jaakad kuwa qaraxa ah, markii ay Ciidamada Mareykanka ku soo dhowaadeen goobtii uu ku dhuumaaleysanayay oo ahaa dhulka hoostiisa, kaddib duqeyn ay diyaaradaha Mareykanka ka fuliyeen goobtii uu ku sugnaa.
Trump ayaa sheegay in goobta uu ku dhuumanayey al-Baqdaadi laga soo ururiyey dokomentiyo xasaasi ah, wuxuu xaqiijiyey in ay dabagali doonaan argaxisada kale oo ka midka ah Daacish.
Wuxuu tibaaxay in ciidankii goobtaasi galay si nabadgelyo uga soo baxeen, wuxuu sidoo kale ku daray in al-Baqdaadi ay la dhinteen seddax caruurtiisa ka mid ah.
Wuxuu Trump u mahad celiyey dalalka Ruushka, Turkiga iyo Kurdida.
Baqdaadi ayaa sanadkii 2014 ku dhawaaqay Khilaafo islaami ah ee dalalka Ciraaq iyo Suuriya, xilligaasoo Kooxda uu hoggaamiyo ee ISIS la wareegtay inta badan labadaas dal, kana fulisay dilal badan iyo weeraro.